Dia ny Fitadidianao Ianao ho marina araka ny hevitrao no? - News Fitsipika
Dia ny Fitadidianao Ianao ho marina araka ny hevitrao no?
Tsy manadino ny zavatra – fa ny zavatra izay isika mahatsiaro ho marina rehefa te hino?
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Dia ny fahatsiarovana ho marina araka ny hevitrao no?” dia nosoratan'i Pete Etchells, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 8 Aogositra 2016 06.30 UTC
Mind Gamers: Ahoana tsara no hanisa ny fahatsiarovana dia? Mety hanadino ny zavatra tsindraindray, fa ny zavatra isika dia somary mahatsiaro marina, marina? Ny olana dia, ny fahatsiarovana dia tsy ho mety ho diso tahaka mba te-hino, ary afaka hizaha toetra izany ianao amin'ny fampiasana ny kely saina fanandramana etsy ambany.
Vakio amin'ny alalan'ny tsirairay ny telo lisitra kosa, nefa aza mandany ela loatra eo misy olona teny. Sary: Pete Etchells ho an'ny Guardian
Andramo izany ny tenanao
Topazo maso ny telo lisitra ambony, ary mamaky teny tsirairay ho momba ny faharoa.
rehetra natao? Great.
Ankehitriny isika dia handeha hanao tsotra fankasitrahana fitsapana - eto ambany no hafa lisitry ny teny ho anareo mba hijery. Tsy mijery indray, Mariho teo amin'izay anankiray aminy niseho tao amin'ny lisitra telo ianao vao scanned. tsy misy fangalana!
Top – seza – torimaso – seza – Slow – Strong – Manoaka – Mountain – Sweet
Raha nilaza fa ambony, seza ary manoaka teo amin'ny lisitra, ianao pentina eo. Toy izany koa, Raha mihevitra fa miadana, mamy ary mahery tsy hita na aiza na aiza no, ianao ihany koa ny marina. Ahoana raha seza, tendrombohitra ary torimaso anefa? Dia toa tahaka ny tokony ho ao amin'ny lisitra, fa tsy toa nanao. Ny sasany aminareo dia mety ho sada izany, fa be dia be ny olona mirona hoe, amin'ny tsara tarehy be ny azo antoka, fa ny teny teo.
Diso fanekena sy ny DRM modelim
Izany fanandramana dia avy mahazatra 1995 fianarana avy Henry L. Roediger sy Kathleen McDermott ao amin'ny Rice University any Texas. Mifototra amin'ny asa teo aloha amin'ny alalan'ny James Deese (noho izany ny anarana Deese-Roediger-McDermott, na DRM, modelim), mpandray anjara nandre andiam-teny lisitra, izay avy eo dia tsy maintsy mahatsiaro tao an-tsaiko. Taorian'ny resaka fohy miaraka amin'ny mpikaroka, ny mpandray anjara tamin'izany vaovao nomena lisitra ny teny. manakiana, io lisitra vaovao ao ny sasany teny izay mifandray amin'ny zavatra tsirairay eo amin'ny tsirairay ny lisitra voalohany - ohatra, raha torimaso Tsy hita ao amin'ny lisitra 3 ambony, Izany dia midika hoe mifandraika amin'ny tsirairay no teny izay hiseho (fandriana, fitsaharana, reraka, sy ny sisa).
Related: The Stroop fitsapana: ahoana no fiteny maro loko?
Manaraka, ny mpandray anjara milaza ny fomba tsy maintsy matoky izy ireo fa ny teny ao amin'ny lisitra vaovao efa niseho teo aloha. Roediger sy McDermott ny vokatra dia nampiseho fa ny olona nilaza hamantatra ny teny mifandray (toy ny torimaso) ny isaky ny teny izay natolotra raha ny marina ao amin'ny lisitra - manodidina 85% ny fotoana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, olona milaza mitadidy zavatra, somary toky, izay tsy nitranga.
Misy maromaro ny antony vokany io miseho. Iray soso-kevitra nomen-Roediger sy McDermott mifandray amin'ny zavatra fantatra amin'ny anarana hoe associative dingana; satria ny teny rehetra ao amin'ny lisitra nomena dia mifandray amin'izy samy izy, izy dia matetika hampavitrika teny hafa mifandray amin'ny fahatsiarovana. Teny SAMPA asa vita manampy ny hanasongadina izany teboka. Raha hoy kosa aho ny teny hoe 'labiera', ka mangataka anao mba hamenoana ny banga eto:
Mety ho azo inoana kokoa hoe W, na D, F, L sy M dia ho tanteraka rehetra azo ekena. Izany noho ny labiera sy ny divay dia mifandraika hevitra, ary nanao hoe: ny hafa no anaovana mora kokoa ny mitadidy ho fahatsiarovana.
Mazava ho azy, anton-javatra hafa tonga ao an milalao miaraka amin'ny DRM modelim. Mety hitranga ihany koa ianao satria mieritreritra ny teny torimaso rehefa mamaky ny mifandray lisitra, izay mitarika anareo diso mihevitra fa tena nanao vakio ny teny taty aoriana. na inona na inona anefa, fampianarana diso fankatoavana hanao zavatra iray mazava: ny fahatsiarovana dia tsy ho marina foana rehefa te hino.